29th March 2019 - Samasta Khabar
छोरी अर्को कोठामा, श्रीमान ले गरे श्रीमतीको हत्या
धेरै दिनपछि जब एक महिला उनकै घरमा मृत फेला भएपछि पुलिसले हत्या आरोपमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ। यो घटना स्वोरुप्नगर, दिल्ली, भारत को हो । यस घटनाका आरोपित मृत महिलाका श्रीमान बिकाश शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ । पैसाको बिषयलाई लिएर झगडा परेपछि बिकाशले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेका हुन् । टाइम्स अफ इंडियाका अनुसार, उनका १० बर्षीय छोरी पल्लो कोठामा सुतिरहेकी थियिन । हत्यालाइ लुकाउनका लागि अटो रिक्सा ड्राइभर बिकाशले आफ्नी श्रीमतीको बिउति पार्लर मा काम गर्ने महिलालाई बोलाई आफ्नी श्रीमती सविता बिहान घर छोडेपछि नफर्किएको भनि बहाना बनाए। जब…
आज १६ चैत्र २०७५, शनिवारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
मेष राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मिहिनेत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। वृष मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । समाजमा इज्जतमा पाइनेछ । शुभकामको चौतर्फी चर्चा चल्नेछ । मिथुन स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कर्कट विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्ने समय छ । फाइदा, घाटा, सुख, दुख उस्तै तवरले हुने दिन छ । सिंह अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । सुखद दिन रहको छ । यात्रामा सहभागी हुन पाइएला । आँटेको कुरा पूरा हुने समय छ । कन्या प्रेममा विवाद उत्पन्न हुनसक्ला…
गूगलमा कहिल्यै आबेदन दिएनन् तर युबकले पाए १.२ करोडको जागिर
आइटी फिल्डमा लागेका लाखौ बिद्यार्थीहरुको सपना हुन्छ कि गूगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता ठुला ठुला कम्पनीमा काम गर्ने । तर भारतका एक २१ बर्षीय युबक जो आइटी फिल्डबाट होइनन्, उनीलाई गूगलले १.२ करोडको जागिरको अफर गरेको छ । थाहा पाउँ को हुन् ती युबक मुम्बईमा रहेका २१ बर्षीय अब्दुल्ला खान इञ्जिनॆअरिङ्ग छात्र हुन् । उनि अब आउने यही सेप्टेम्बेर देखि गूगलमा १.२ करोड को जागिर गर्दै छन्। खानले “श्री एलआर तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज”, मीरा रोड, मुंबई देखि आफ्नो इंजीनियरिंग पढाई गरेका हुन्। अचम्म को कुरा के छ भने उनीले गूगल मा जागिरको…
25 dead in fire accident in Dhaka.
Huge fire in Dhaka caused death of 25 people and 70 are severely injured whose treatment is going in the nearby hospital. It tookahuge effort for the firefighters to control the fire and limit any further damage. As per the reports, many people jumped from the building to survive the fire whereas 13 people could not to anything whose dead bodies were collected afterwards. It wasa22 floor building and the incident took place on Thursday. According to the people nearby the building, fire took place on…
चेक काटदै हुनुहुन्छ ? यो सूचना पढ्नुहोस
तपाई यदि कसैलाई चेक मार्फत भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोला । आफ्नो खातामा कति रकम छ भन्ने ढुक्क भएपछि मात्र चेक काट्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बिषयमा सूचनानै जारी गरेको छ । कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीनजानी कसैलाई चेक काटी दिनुहुदैन । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरि उक्त चेक रकम भुक्तानी नभएमा बैंकिंग कसुर गरेको मानि चेक काट्ने व्यक्तिलाई बैंकिंग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तिन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेकोले त्यस्तो कार्य नगर्न, नगराउन…
आर्थिकLeaveacomment
आज १५ चैत्र २०७५, शुक्रवारको राशिफल
मेष संगीतमा रुची बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । स्वास्थ्य स्थिति कमजोर रहन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला । वृष प्रेममा बाधा आउन सक्ला । काममा सफलता पाइनेछ । कुनै समयमा धेरै धन खर्च हुनेछ । मिथुन गरिएका कर्मको प्रतिफल पाइनेछ। तर, परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। अरूलाई समय दिँदा आफू पछि परिनेछ। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। कर्कट सोचेको कार्य पूरा होला । धेरैको प्रशंसा पाउने सम्भावना छ । मनमा शान्ति छाउनेछ । सिंह रमाइलोपनमा बित्ने दिन छ । जमघटमा सहभागी भइएला । बौद्धिक वृद्धि होला । धन लाभ हुने समय छ…